१७ लाखको रिचार्जकार्ड सहित एकजना पक्राउ « Tulsipur Khabar
१७ लाखको रिचार्जकार्ड सहित एकजना पक्राउ
घोराही, १५ कात्तिक ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले १७ लाखको नेपाल टेलिकमको रिचार्जकाड चोरी गर्ने एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरि सार्बजनीक गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले रिचार्ज कार्ड चोरी गर्ने रोल्पा माडी गाउँपालिका वडा नं. १ निवासी २१ बर्षीय दलवहादुर पुनलाई बुधबार पक्राउ गरि आज सार्बजनीक गरेको हो । उनको साथबाट १६ लाख १० हजार रुपैयाका रिचार्ज कार्ड समेत बरामद गरिएको प्रहरीले बताएको छ । ९० हजारको रिचार्जकाड भने विक्रि गरिसकेको प्रहरीले बताएको छ ।
रिचार्ज चोरी गरि रोल्पा थवाङ गाउँपालिकाका बिभिन्न क्षेत्रमा बेचबिखन गरिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा ईलाका प्रहरी कार्यालय थवाङ रोल्पाको सहयोगमा पुनलाई पक्राउ गर्न सफल भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णहरि शर्माले जानकारी दिए । आरोपीलाई २१ दिन पछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
उनलाई पक्राउ गरेपछि रोल्पा र उनको ससुराली प्युठान स्वर्गद्धारी नगरपालिका वडा नं. ७ मा लुकाई छिपाई राखेको अबस्थमा रिजार्च कार्ड बरामद गरिएको प्रहरी उपरीक्षक शर्माले बताए ।
रोल्पाबाट ५० का दरका चारसय थान, एकसय दरका दुई हजार थान रिचार्जकार्ड बरामद गरिएको हो । त्यस्तै प्युठानबाट ५० दरका रिचार्जकार्ड तीनहजार छ सय थान र एकसय दरका आठहजार पाँचसय थान र पाँचसय दरका तीनसय ६० थान थान बरामद गरिएको पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी दिईएको हो ।
जम्मा १६ लाख दश हजार बरामद गरिएको छ र थप रिचार्जकार्डका सम्बन्धमा उनुसन्धान भईरहेको प्रहरी उपरीक्षक शर्माले बताए । असोज २३ गते रिचार्जकार्ड चोरी भएको भएपनि २१ दिनपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो । ना ६ ख ९३४५ नम्बरको गाडीबाट दाङ–चितवन लैजादै गरेका रिचार्ज कार्ड भालुबाङबाट चोरी गरेको खुल्न आएको प्रहरी उपरीक्षक शर्माले बताए । घोराही स्थित शुभम नमस्ते वितरकले नमस्तेको रिचार्ज चोरी भएको प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि प्रहरीले खाजीकार्य सुरु गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति : २०७५ कार्तिक १५ गते बिहिवार